Ny fambolena lovain-jafy...
Ny fikambanana "ecovilllage de madagascar" dia mivohy ny tetikasa fambolena lovain-jafy. Fikambanana niorina tamin'ny taona 2014, misehatra amin'ny fampiofanana marolafy, fiankaviana 18 ankehitriny no mandrafitra azy. Sotoavina iainan'ny fikambanana: Fanajana ny tontolo iainana (tany...), fanajana ny maha-olona, fahaizana mizara. Tanjona : Fahavitan-tena ara-tsakafo miitatra amin'ny ara-toekarena sy ny fahasalamana...
Ny tetikasa Kobaby sy ny trandraka
♦ Ny tetikasa Kobaby : Tetikasa iarahana amin'ny Ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy, tontosaina any amin'ny Faritra Diana, fiaraha-misa amin'ny AFD. Tetikasa mahakasika sehampiharina miisa dimy : Ny varimanitra, Ny tantely (an-tanety sy an'ala honko), ny fihariana voankazo, ny Jono maharitra ary ny fizahan-tany ifotony. ♦ Ny trandraka: biby mampinono, misy miantso azy hoe "tandraka" na " Kelora", biby miavaka satria tsy manana rambo, mirefy 145 hatramin'ny 328mm. ♦ Bolabolanà andramena miisa 87, no tratra tao amin'ny distrika Amparafaravola...
Ny doro tanety sy doro ala
Mirongatra ny doro tanety sy ny doro ala amin'ny faritra maro eto amintsika, misy fiatraikany ratsy raha tsy hiteny afatsy ny fahaloton'ny rivotra. Ny taona 2018 sy ny 2019 no tena nirongatra ny doro tanety sy doro ala fa tamin'ity taona 2020 ity dia nihena ireo famaizana. Politika nasiônaly: fanabeazana sy fametrahana lalàna...